Fanazaran-tena sy fampiofanana - Vondt.net
Archive ho an'ny sokajy: Fanatanjahan-tena sy ny fampiofanana
6 fanazaran-tena yoga ho an'ny Stress
16 / 08 / 2016 /Fanamarihana 0/i kalitao Articles, Fanazaran-tena sy fanatanjahan-tena/av loza
Miady saina ve? Ity misy fampiofanana yoga 6 izay afaka manampy anao haka aina sy hampihenana ny fihenan-tsofina. Aza misalasala mizara amin'ny olona iray adin-tsaina.
Ny fampihetseham-batana yoga sy yoga dia mety mahasoa rehefa miala sasatra sy miala sasatra amin'ny fiainana andavan'andro. Ny famelarana sy ny fivezivezena tsy tapaka dia mety ho fepetra tsara hanohitra ny hozatra mihenjana sy ny tonon-taolana mafy. Miezaha manokana 20-40 minitra isan'andro ho an'ity, avy eo ianao dia hahita ny fandrosoana lehibe.
1. Sukhusana (toerana fisaintsainana)
Ity posture yoga ity dia mamoaka ny diaphragm ary mamela anao hisaina miaraka amin'ny kibonao. Mifantoha amin'ny fialan-tsasatra ary sempotra amin'ny vavony. Makà fofona lalina amin'ny oronao ary avy eo misitrika moramora amin'ny vavanao. Avereno ny fofon'aina 30-40.
Toerana yoga miala sasatra izay mampitombo ny fivezivezena amin'ny valahana sy ny seza. Mivelatra izy io ary manome fahafaha-misaina kokoa ho an'ny ambany kokoa. Tadiavo ny toerana ahafahany mivelatra mora foana ary mitazona mandritra ny 30 segondra alohan'ny hamerenany ireo seta 3-4.
Toerana yoga ahafahanao mamoaka ny fihenjanana sy ny fihenjanana. Io dia mamelatra ny lamosina manontolo hatrany amin'ny faritra ambany ka hatrany amin'ny tetezamita mankany amin'ny hatoka - ny hozatra izay fantatsika rehetra dia mety ho sarotra ny mamelatra amin'ny fomba tsara. Mivelatra izy io ary manome malefaka bebe kokoa ho an'ny ambany sy ambony. Mijoroa amin'ny lohalinao ary avelao ny vatanao hianjera amin'ny sandry ahinjitra araka ny hita eo amin'ny sary - ataovy izay hanaovanao izany amin'ny fihetsehana milamina sy voafehy. Tadiavo ny toerana ahafahany mivelatra mora foana ary mitazona mandritra ny 30 segondra alohan'ny hamerenany ireo seta 3-4.
4. «Teknika 5» (Teknika lalina mifoka rivotra)
Ny fotokevitra lehibe amin'ny teknika fohana lalina voalohany dia ny miaina sy mivoaka in-5 ao anatin'ny iray minitra. Ny fomba hahatratrarana izany dia ny miaina fofonaina lalina ary manisa hatramin'ny 5, alohan'ny hamoahana azy mafy ary isao indray ny 5. Ny mpanorina ny teknika dia manoratra fa misy fiatraikany tsara amin'ny fiovaovan'ny tahan'ny fo mifandraika amin'ity napetraka amin'ny matetika kokoa ity. vonona kokoa hiady amin'ny fihetsiky ny adin-tsaina. Ity teknika miaina ity dia azo ampifangaroina amin'ny toerana yoga Sukhusana.
Viparita Karani dia postura yoga iray izay manome fitsaharana tsara ny vatana rehefa manaisotra tsindry amin'ny hatoka sy lamosina. Rehefa manao fanatanjahan-tena ity dia mampiasa masom-baravarana yoga sy lamba famaohana ho an'ny fitomboan'ny hip. Fantatrao ny tenanao fa mety tsara aminao ny mivelatra - manandrana ny halaviran'ny rindrina sy ny zoro amin'ny tongotra. Manandrama mihazona ny tongotrao rehefa avelanao hilentika ny soroka sy ny hatokanao ho any amin'ny tany. Avereno moramora ny hatokanao ary avelao hihemotra amin'ny tananao ny sandrinao. Mihazona io toerana io mandritra ny 5-10 minitra raha mifoka milamina sy mifehy.
Fanatanjahan-tena mahomby izay mamoaka fihenjanana amin'ny tendany sy ny soroka. Mijoroa amin'ny tongotra efatra, ary atsangano miadana amin'ny valindrihana ilay seza, mandra-pahatonganao any amin'ilay toerana misy ny sary. Tazomy mandritra ny 30-60 segondra eo ny toerana (na raha mbola azonao atao) ary ampidino moramora amin'ny tany indray ianao avy eo. Ny fampihetseham-batana dia mampihetsika ireo rafitra sy hozatra mety manodidina ny soroka amin'ny fomba tsara. Avereno mihoatra ny seta 4-5.
Ireto misy fanazaran-tena tsara amin'ny yoga izay tokony hatao isan'andro mba hahitana vokany betsaka indrindra - saingy fantatray fa tsy dia mamela an'izany foana ny andro be atao, koa mihevitra izahay fa tsara ianao na dia mahavita azy isan'andro aza.
Impiry aho no mila manao fanazaran-tena?
Miankina aminao daholo izany. Jereo hoe inona no mety aminao amin'ny voalohany ary manamboara miadana fa aza mandroso. Mety handany fotoana be nefa tena mahafa-po. Raha manana Diagnostika ianao dia mangataka aminao izahay hanontany ny mpitsabo anao raha mety hahasoa anao ireo fanazaran-tena ireo - angamba manandrama tsara ny tenanao. Raha tsy izany dia mamporisika anao izahay handeha ary handeha hitsangantsangana amin'ny tany mikitroka raha azo atao.
Aza misalasala mizara ireo fanazaran-tena amin'ireo mpiara-miasa, namana ary olom-pantatra. Raha tianao ny fanazaran-tena nalefa ho antontan-taratasy miaraka amin'ny famerimberenana sy ny toy izany, mangataka aminao izahay toy ny ary mifandraisa amin'ny alàlan'ny pejy Facebook eto. Raha manana manana fanontaniana ianao dia mandeha fotsiny Mifandraisa aminay na maneho hevitra mivantana ao amin'ny iray amin'ireo lahatsoratra mifandraika amin'izany momba ny olanao.
NEXT PAGE: - Fanaintainana eo amin'ny hatoka? Tokony ho fantatrao izany!
ZAVA-DALANA: - Fanatanjahan-tena tsara 5 hiadiana amin'ny soroka ratsy
Inona no azoko atao na dia fanaintainana sy hozatra?
1. Fanatanjahan-tena ankapobeny, fanatanjahan-tena manokana, fanitanana ary asa atao, fa mijanona ao anaty fetra fanaintainana. Roa dia mandeha mandritra ny 20-40 minitra dia manatsara ny vatana manontolo sy ny hozatra maharary.
2. Baibolam-pandeha / basika famonoana manoro hevitra mafy izahay - tonga amin'ny habe samihafa izy ireo mba ahafahanao mikapoka tsara na dia amin'ny faritra rehetra amin'ny vatana. Tsy misy ny fanampian'ny tena tsara kokoa noho izao! Manoro hevitra manaraka ireto izahay (tsindrio ny sary eto ambany) - izay vongam-paosy 5 / teboka fandidiana mihatra amin'ny habe samihafa:
3. fiofanana: Fiofanana manokana miaraka amin'ny tetika fampiofanana ataon'ny mpanohitra isan-karazany (toy ny ity fitambarany feno 6 knits amin'ny fanoherana samihafa) afaka manampy anao hampiofana ny tanjaka sy ny fiasa. Ny fanazaran-doto dia matetika misy fiofanana manokana manokana, izay mety hitarika amin'ny fisorohana ny ratra mahomby kokoa sy ny fampihenana ny fanaintainana.
4. Fanavotana fanaintainana - mangatsiatsiaka: Biofreeze dia vokatra voajanahary ahafahana manamaivana ny fanaintainana amin'ny alàlan'ny hatsiaka ny faritra malefaka. Ilaina tokoa ny mangatsiaka rehefa mafy ny fanaintainana. Rehefa milamina izy ireo dia aroso ny fitsaboana hafanana - noho izany dia tokony tsara raha misy ny hatsiaka sy ny fanafanana.
5. Manamaivana ny fanaintainana: Ny fampanjanana hozatra henjana dia mety hampitombo ny fifindran-dra ary hampihena ny fanaintainana. Manoro hevitra ireto izahay ireto azo ampiasaina indray ny entona mafana / mangatsiaka (tsindrio eto raha hamaky bebe kokoa momba azy io) - izay azo ampiasaina na ny fampangatsiahana na fanamainam-bolo (na ny fihenan-tsetroka) na ny fanamainana (azo hafanaina amin'ny microwave)
Vokatra natolotra ho fanamaivanana ny fanaintainan'ny hozatra sy ny fanaintainana
Biofreeze (Mangatsiaka / cryotherapy)
Manenjika i indray og vozony? Manoro hevitra ny tsirairay izahay fa misy fanaintainan'ny lamosina mba hanandrana fiofanana mitombo mikendry ny valahana sy ny lohalika koa.
ANDRAMO IZAO AZONAO: - Fanatanjahan-tena tsara 5 hanohitra an'i Sciatica
VONONA DIA VAKINA: - Fanatanjahantena 6 mahomby amin'ny lohalika mandavantaona
FANTATRAO: - Ny fitsaboana mangatsiaka dia afaka manome fanaintainana fanaintainana amin'ny hozatra sy hozatra? Ankoatra ny zavatra hafa, Biofreeze (azonao atao ny manafatra azy eto), izay ahitana vokatra voajanahary indrindra, dia vokatra malaza. Mifandraisa aminay androany amin'ny alàlan'ny pejinay Facebook raha mila tolo-kevitra hafa namboarina ho anao ianao.
VONONA DIA VAKINA: - labiera na divay vera ho an'ny taolana mahery? Eny azafady!
- Mila fanazavana bebe kokoa ve ianao sa manana fanontaniana? Angataho ny matihanina fitsaboana mahomby amin'ny alàlan'ny antsika Facebook Page.
Iray isika maimaim-poana ny fanompoana toerana ahazoan'i Ola sy Kari Nordmann valiny amin'ny fanontaniany amin'ny alàlan'ny serivisy fanadihadihana maimaimpoana momba ny olan'ny fahasalamana musculoskeletal - tsy mitonona anarana tanteraka raha tian'izy ireo izany. An-jatony maro no efa nahazo fanampiana - ka inona no andrasanao? Mifandraisa aminay tsy misy adidy anio!
Sary: Wikimedia Commons 2.0, Creative Commons, Freestockphotos ary nandefa fandraisana anjara / sary avy amin'ny mpamaky.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Yoga-mot-stress.jpg?media=1648573622 650 1000 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2016-08-16 17:18:412022-03-18 17:27:366 fanazaran-tena yoga ho an'ny Stress
Pejy 1 amin'ny 34123>»